Soo dejisan AutoIt 3.3.14.5 – Vessoft
WindowsHorumarinKobcinta dadka kaleAutoIt
Bogga rasmiga ah: AutoIt
AutoIt – software ah in ay qalabayn qabashada shaqooyinka kala duwan ee nidaamka qalliinka. AutoIt awood si ay u abuuraan script in uu isticmaalaa ka VBScript iyo hawlaha aasaasiga ah ee qaab iswada hawlgallada inta badan soo noqnoqda. software The kuu ogolaanayaa inaad inuu ku soo celiyo dhaqdhaqaaqa iyo qasabno of mouse ka, maamulka suuqa kala codsiyada, qasabno of furayaasha keyboard, la sabuurad iwm AutoIt ku jira qalab kala duwan in la furo, edit iyo ururiso qabnay shaqeeyaan. Sidoo kale AutoIt fulisaa isku duwidda ee script gacanta ku galay file ah eedeysanuhu u bilowdo nooca la mid ah codsiyada file.
Is hawlgallada kala duwan
Guurida iyo resizing daaqadaha
Waxay abuurtaa codsiyada gui
Isku duwidda ee qabnay
Soo dejisan AutoIt
Faallo ku saabsan AutoIt
AutoIt Xirfadaha la xiriira